I-China iKhaya lokuQeqesha abaQeqeshi bomzimba oLungeleleneyo woLusu lweMisipha yokuPhumla kunye noMvelisi woNcedo lweNtlungu | NQ
1) INDLELA YOKUGQIBELA YENKQUBO YOKUGQIBELA YOKUGQIBELA: inesakhiwo esomeleleyo esenza ukuba yomelele. Ukuzaliswa kwe-roller kuhamba kakuhle kwaye kuhlala njalo.
I-2) IZIBambo EZINGEZO ZOKUSETYENZISWA: Ukuphatha okubambekayo okuphucukileyo kokubamba ngamanqaku e-convex kuyanceda ukuba ubethe kula mabala anzima ukufikelela kuwo.
I-3) YAKHO NGOKUPHILA KWAKHO NGOKWENYAMA: Isolor yokuthanjiswa ikunceda ukuba uphumle izihlunu eziqinileyo nezomeleleyo.
I-4) UKUKHANYA KUNYE NOKUQHUBA: Mncinci kodwa unamandla, thatha umthambo, sebenzisa ekhaya okanye kumabala ezemidlalo njl.njl.
-Imveliso inokujolisa kumanqaku oxinzelelo ukukhuthaza ukubuyela kwakhona kwezicubu kunye nokukhuthaza ukujikeleza okuphulukisayo ngokukhawuleza.
-Iziqhuqhu ezityiweyo zinokubonelela ngokuthanjiswa okunzulu kwezihlunu zoncedo olusebenzayo kunye nonyango lweentlungu zomzimba kunye nokuqaqamba.
-Ilungele abagijimi kunye neembaleki ezifumana ukwenzakala okunxulumene nezemidlalo okanye ubunzima ekunciphiseni nasekulululeni izihlunu nasekunciphiseni amanqaku.
Uyilo lwe-Ergonomic yenqanaba lesithathu lokuthambisa, inqaku elichanekileyo lokukhuthaza,
Ityhubhu yentsimbi eshinyeneyo, amandla okuqina, akukho lula ukukhubazeka, isibambo sokulwa nesiliphu, uyilo lwearc, uzive ukhululekile ukubamba
Ibhola enzima i-360 degree roll roll, kulula ukuyisebenzisa
Intonga nganye yeGwebu ipakishwe ngengxowa yeplastiki, ii-50pcs / ctn.
ukupakisha kwesiko kuyafumaneka.
Sineqela lobuchwephesha, isebe lokuthengisa, isebe lokuhlola, inkqubo epheleleyo yemveliso inokukubonelela ngenkonzo egqibeleleyo.Ungazithemba iimveliso zethu ukuxhasa impilo yakho nentlalontle. Iimveliso zethu zamkelwe ngokubanzi kwaye zithembekile kubasebenzisi kwaye zinokuhlangabezana ngokuqhubekayo nokutshintsha iimfuno zoqoqosho nezentlalo.
Sikunye nemveliso yethu ephambili kunye neenkqubo zolawulo lomgangatho olungqongqo, ukuzibophelela kwethu kumgangatho kuqinisekisa ukuba sibonelela abathengi bethu ngeemveliso abanokuthi nabona bantu bacalulayo bazingce ngokuba nazo.
Ukuba unomdla kuyo nayiphi na imveliso yethu okanye ungathanda ukuxoxa ngomyalelo wesiko, nceda ukhululeke ukunxibelelana nathi .Sijonge phambili ekwenzeni ubudlelwane obuneshishini olunempumelelo kunye nabathengi abatsha kwihlabathi liphela kungekudala.
Egqithileyo Ukuhanjiswa kwefektri ngokuthe ngqo kumandla omzimba wokuxhathisa amandla ebhendi yomzimba I-latex inyusa ibhendi yokuncedisa
Okulandelayo: Ihowuliseyili iLatex 11 PCS Resistance Tube Band Iseti yezixhobo zeFektri yoQeqesho lweBhanti China Umthengisi
Imisipha Relax intonga yokuthanjiswa
Uqeqesho ezishicilelweyo umgangatho elungileyo pu yesikhumba mma bo ...
2021 New Good Umgangatho Ukuncipha esinqeni Exercis ...
Uyilo New PVC intambo isantya ukutsiba isantya tsiba ...
Ubushushu anti-ukudinwa anti-amagwebu amagwebu PVC ...
Ihowuliseyili Quality High iqatha esihlahleni Running Spor ...
New Fashion Sport Workout Fitness Ubunzima Liftin ...